Ku kobci barnaamijkaaga iPhone-ka oo leh Banner App Smart ah | Martech Zone
Ku kobci barnaamijkaaga 'iPhone App' oo leh Banner App Smart ah
Khamiista, Noofembar 29, 2012 Khamiis, Maarso 7, 2013 Douglas Karr
Wada-hawlgalayaashayada at Mobilka Postano, dadka waawayn ee dhistay barnaamijkeena iPhone-ka, waa dad aan caadi ahayn oo ay la shaqeeyaan oo ay dhisteen codsi aan caadi ahayn. Haddii aadan hubin, fadlan samee! Waxaan kuheynay fiidiyowyadeena arjiga hadda - waad gujin kartaa oo si toos ah ugala socon kartaa dalabka… aad u qabow!
Haddii aadan aqoon waxa aqoonsigaaga aqoonsigu yahay, waad ku eegi kartaa adiga iTunes Link Kan sameeyey. Waa lambarka ka dambeeya id iyo ka hor calaamadda su'aasha. Kaan waa 498000390.
Markaad ku darto sumadda meta, natiijadu waa cajiib. Safari wuxuu ku darayaa wicitaan wicitaan ah oo loogu talagalay waxqabadka barnaamijkaaga iPhone kaas oo u oggolaanaya booqdahaaga inuu si toos ah ugu rakibo codsigaaga Smart App Banner!
Tags: macruufka 6iphoneipad apppostanomobilka postanobanner app smartbanner smart
10 Tilmaamaha Samatabbixinta Fasaxa
Isbeddellada Macaamilka Bulshada ee Macaamiil 2012